uric acid – Healthy Life Journal
All posts tagged "uric acid"
သွေးထဲမှာ ယူရစ်အက်ဆစ်များတာက စိုးရိမ်ရသလား
———၊ (အထွေထွေအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးဖြေကြားသည်) ၊——— Q. သွေးထဲမှာ ယူရစ်အက်ဆစ်များတာက စိုးရိမ်ရပါသလား ဆရာ။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေ သိပါရစေဆရာ။ A. သွေးထဲမှာ ယူရစ်အက်စစ်များတာက စိုးရိမ်ရလောက်တဲ့ ပြဿနာကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ယူရစ်အက်ဆစ်က ခဏတဖြုတ်များတာမဟုတ်ဘဲ နှစ်နဲ့ချီပြီး များနေရင်...
ယူရစ်-အက်စစ် (Uric acid)
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— Uric acid များရင် ဆိုးကျိုးက ဘာဖြစ်တတ်လဲ။ ၅.၇ ရှိရမှာကို ၈.၈ ဖြစ်နေတာပါ။ အစားအစာကရော ဘာတွေရှောင်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ ဓာတုဗေဒကျောင်းသားတွေကတော့ Uric acid ဆိုတာ C5H4N4O3 လို့ရေးကြမယ်။ ဆေးကျောင်းသားတွေကတော့...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သွေးကြောထဲ ယူရစ်အက်ဆစ်မြင့်တက်နေတာကြောင့် ဂေါက်အဆစ်ရောင်နာရောဂါအဖြစ်များပါတယ်။ ဂေါက်အဆစ်ရောင်နာရောဂါမဖြစ် အောင်ကာကွယ်ဖို့ အစားအသောက်စားတဲ့ အလေ့အထကိုပြုပြင်ရင်း ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ သွေးထဲက ယူရစ်အက်ဆစ်ပမာဏ လျော့ကျစေဖို့ အရက်၊ သကြားပါတဲ့ အစားအသောက် တွေကိုဆင်ခြင်ရပါမယ်။ အသား၊ ပင်လယ်စာတို့လို ပျူရင်းပါဝင်မှုများတဲ့အစာတွေကို...
ယူရစ်အက်ဆစ် တက်နေရင် . . .
မေး. ယူရစ်အက်ဆစ်တက်နေပါတယ်။ ဘာလုပ်ရပါမလဲ။ ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ Lynn KK (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အစားအသောက်ဆင်ခြင်ပြီး ယူရစ်အက်ဆစ်ကျစေတဲ့ဆေး သောက်ဖို့လိုပါတယ်။ ၀မ်းတွင်းသား၊ ကလီစာ၊ ငါးအူ၊ ငါးဥ၊ မျှစ်၊ ပဲပင်ပေါက် စတာတွေရှောင်ပါ။ အရက်၊ ဘီယာမသောက်သင့်ပါ။...